कस्ता व्यक्तिलाई हृदयघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ ? (स्वास्थ्य) | Yopoho Directory
कस्ता व्यक्तिलाई हृदयघात हुने सम्भावना बढी हुन्छ ? (स्वास्थ्य)
बिलासी जीवन, गलत खानपानका कारण मानिसहरूमा मुटु सम्बन्धी रोगको खतरामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा वृद्धहरूमा मात्र होइन, युवाहरूमा पनि हृदयघातको खतरामा वृद्धि भइरहेको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलस्ट्रोल र थायराइडका रोगीहरुमा हृदयघात हुने खतरा सबै भन्दा बढी हुन्छ । हृदयघात हुने खतरा मोटो मानिसमा पनि बढी हुन्छ । यसबाहेक युवाहरूले लामो समय
सम्म स्वास्थ्यको ख्याल नराख्ने हो भने उनीहरूमा पनि हृदयघातको सम्भावना बढेर जान्छ । आज हामी कस्ता व्यक्तिलाई बढी हृदयघात हुन्छ , छोटो जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
उल्टी आउनु, छाती दुख्नु, रिंगटा लाग्नु, काँध, गर्दन र ढाड दुख्नु, अशान्त मन , चिडचिडे हुनु, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुनु, कमजोरी महसुस हुनु, तनाव आदि ।
ह्दयघातको बढी खतरा हुने व्यक्तिहरू
सबैलाई थाहा छ कि मोटोपन विभिन्न रोगहरूको जरा हो । यसले गर्दा हृदयघात हुने खतरा पनि बढेर जान्छ । जसको तौल बढी हुन्छ, उनीहरूलाई उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलको सम्भावना बढेर जान्छ , जुन हृदयघात हुने एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।
उमेर बढ्दै जाँदा मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न छोड्छन् । यस्तो अवस्थामा गलत खानपान र व्यायाम नगर्दा कोलेस्ट्रोल बढ्न पुग्छ , जसले हृदयघातको सम्भावनालाई बढाउँछ ।
जुन व्यक्तिको परिवारमा कुनै सदस्य मुटुको रोगले पीडित छ , उनीहरूमा पनि मुटु सम्बन्धी रोगको सम्भावना बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा सधैँ स्वस्थ खानपान तथा व्यायाममा ध्यान दिनु पर्छ ।
उच्च रक्तचापका रोगीहरुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रामा वृद्धि हुन्छ , जसबाट हार्ट ब्लकेजको आशङ्का बढेर जान्छ । यसबाट रोगीलाई जति खेर पनि हृदयघात हुन सक्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापका रोगीहरुले आफ्नो रक्तचाप सधैँ नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
धूम्रपान गर्ने व्यक्ति
जो व्यक्ति धेरै धूम्रपान गर्छन् , उनीहरूको मुटुमा रगत लैजाने नसा ब्लक हुन्छ , जसले हृदयघातको खतरालाई बढाउँछ । त्यसैले यदि तपाई धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने तुरुन्तै त्यागी दिनुहोस् ।
मधुमेहका रोगीहरुमा पनि रगत ब्लक हुने खतरा बढेर जान्छ , जसले गर्दा हार्ट एट्याकको सम्भावना बढेर जान्छ । त्यसैले सुगर नियन्त्रणमा राखी स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुहोस् ।
Next: बनाना लस्सी (कुकिङ्ग टिप्स)